English Grammar လေ့လာရန် (3rd Edition CD v1.2 ) ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Dictionary » English Grammar လေ့လာရန် (3rd Edition CD v1.2 )
By နေမင်းမောင်8:51 PM33 comments
ကျွန်တော်တို့အခု English Grammer လေးတွေကို Lessons လေးတွေအလိုက် အသံထွက်ရော ကျန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုပါ တစ်ခါတည်းလေ့လာနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အထဲမှာ စာအုပ်လေးကိုပါ PDF ဖိုင်လေးနဲ့ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာ ကို ပြပေး ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာလည်း ကျွန်တော် ဘယ်ကနေစပြီး Run ရမလဲဆိုတာကို နည်းနည်းပြောပြပါ့မယ်။ ပြီးတော့ အခွေနဲ့ Burn ပြီးအသုံးပြုလိုသူများအတွက် အဆင်ပြေအောင် ISO ဖိုင်လေးနဲ့ပါ တစ်ခါတည်း တွဲထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 479 MB ရှိပြီး ကျွန်တော် အပိုင်းငါးပိုင်း ခွဲထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်အရင်ကလည်း အင်္ဂလိပ် Lessons လေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ E-books လေးတွေနဲ့ အတူတူ Audio ဖိုင်လေးတွေပါတစ်ခါတည်းတွဲတင်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူများအတွက် ဒါမှမဟုတ် မိမိတို့ ကလေးတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေမှာပါ။ စာလေးတွေကို ဖြေပြီးရင်တော့ အောက်မှာ အမှားအမှန်ကိုပါ တစ်ခါတည်း စစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ကြည့်ရအောင်ဗျာ။
ဖိုင်အားလုံးပေါင်း ရှစ်ဖိုင်ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးအပိုင်းကနေစပြီးခွဲထုတ်လိုက်ရင် အကုန်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ PDF ဖိုင်လေးနဲ့ စာအုပ်ဖိုင်လေးရယ် ပြီးတော့ CEGIU ဆိုတဲ့ ISO ဖိုင်လေးပါထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ISO ဖိုင်လေးကို ထပ်ဖြည်လိုက်ပါ.။ Setup ဖိုင်လေးတွေနဲ့ အတူတူ Applications ဖိုင်လေးတွေပါ တစ်ခါတည်းထွက်လာလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ SetupClarityRecorder ဆိုတဲ့ Application လေးကို အရင်ဆုံး Run ရပါမယ်။ ပြီးရင် Flash Player မရှိတဲ့သူတွေအတွက် ကတော့ အထဲမှာ Flash Player လေးပါတစ်ခါတည်းပါပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Autorun ကနေသုံးလိုက်တာပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ပုံမှာကြည့်လိုက်ပါ။
ဒါလေးက ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ ပထမဆုံးစပြီး Run ပေးရမယ့် ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကတော့ Autorun လေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Autorun မှာ မြင်ရမယ့်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာကနေတစ်ခါတည်း Run ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ CD ထဲကို Burn ပြီးတော့မှ စက်မှာ ပြန်ပြီး Install လုပ်မယ့်သူတွေအတွက်ပါ။ ထွေထွေထူးထူးတော့လည်း သိပ်မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အရင် Software လေးတွေ Run သလိုပါပဲ။ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ သုံးလို့ရပါပြီ။ ကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ Tense လေးတွေအလိုက် ခွဲပေးထားသလို အထဲမှာလည်း သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Lessons လေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော်စက် သုံးလုံးမှာ စမ်းပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ အကုန်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အောက်မှာ အဆင်ပြေအောင် ရှစ်ပိုင်း ခွဲထည့်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ် လေးကနေသာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
Downloading from ifile.it Part (3)
Downloading from ifile.it Part (4)
Downloading from ifile.it Part (5)
Downloading from ifile.it Part (6)
Downloading from ifile.it Part (7)
Downloading from ifile.it Part ( 8 )
သားသား January 13, 2012 at 11:46 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို ယူသွားပါတယ် နောက်လည်းများများတင်နှိုင်ပါစေဗျာ။
Thu Ra January 14, 2012 at 6:25 AM
thank ko nyinaymin
Facebook Sexxxy January 15, 2012 at 12:21 PM
အချိုင်း January 16, 2012 at 2:08 AM
ကျေးဇူးအနန္တ ပါခင်ဗျာ .. ပညာရေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး English Speaking Skill ကို သီးသန့်အထူးပြု
အထောက်ကူပြု ဆော့ဖ်ဝဲ များကို ပညာရေးဦးစားပေး ခေါင်းစဉ်နဲ့သီးသန့်လိုင်းခွဲ ပြုစုပေးပါရန်
Yar Zar January 16, 2012 at 3:58 AM
ကျေဇူးတင်ပါတယ် ကိုနေမင်းမောင် မသိတာလေးတွေ သိခွင့်ရတယ် လိုအပ်တာလေးတွေ ယူလို့ရတယ် လေးစားပါတယ်ဗျာ..
clash January 16, 2012 at 6:35 PM
ဆရာပြောတဲ့ THANK ဆိုတဲ့အားဆေးတစ်ခွက်ကိုကျနော်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာ
bro ရေmediafire ကဆိုရင်ကောင်းမယ်နော်.......ကျန်တဲ.လင့်တွေကဆွဲချင်တိုင်းဆွဲလို.မရဘူးဖြစ်နေတယ်
Anonymous January 25, 2012 at 3:55 PM
Upload, organise and share your files using our free file-hosting service!
file removed in part2. so could u help me bro
Firefox can't find the file at http://i78.ifile.it/sp5r142/44401040/English_Grammar_in_Use_3rd_Edition_CD_v1.2_Book_By_Nay_Min_Maung.part4.rar.
file removed in part4. so could u help me bro
ပညာရေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး English Speaking Skill ကို သီးသန့်အထူးပြု
search box လေးရှိလျှင်လည်းပိုပြီးကောင်းမည်ဟုထင်မြင်မိပါသည်.
တကယ်လို့ရှိလျှင်လည်း ရှာလို့မတွေ့ပါသဖြင့် နေရာပြပေးပါခင်ဗျာ.
(သေချာတာကတော့ အားဆေးဆိုတဲ့ ဆေးတစ်ခွက်တင်မကပါဘူး. ဒိထက်ကျေးဇူးပြုဖို့ကောင်းသော
ကို နေမင်းမောင် ဒီထက်အောင်မြင်ပါစေ..... လောကကြီးမှာ လိုချင်တာ မရတဲ့ အရာတွေကို ရနိုင်ပါစေ.....ကိုနေမင်း အရာရာ အလုံး ပြည်စုံပါစေ...ဒုက္ခရမ်ကင်း ကင်းဝေးပါစေ.....ဒီလိုမျို ပို့စ်တွေ ရှိတယ်ဆိုရင် တင်ပေးပါအုန်းနော်. ကိ နေမင်းမောင် .. အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
i can't download it ..do u have another other way to dl it>> thank u
Anonymous February 20, 2012 at 5:58 PM
နေမင်းမောင် May 19, 2012 at 2:25 AM
ကျွန်တော် လင့်လေးတွေကိုပြန်ပြင်ပေးပြီးပါပြီခင်ဗျာ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ.။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
အခုလို တလေးတစား ချက်ချင်း ပြန်လည်တင်ပေးတဲ့ အစ်ကို ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း ပို့စ်တွေ အများကြီး တင်ပေးပြီး အကျိုးပြုနိုင်ပါစေလို့။ သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ပါစေ အစ်ကို။
thank you.. i can do download
download လူပ်လို့မရတော့ဘူး အစ်ကို၇ယ်..ပြန်ကြည့်ပေးပါအုံး...
mediafire.com ကတင်ပေးလို့ရ ရင် တင်ပေးပါဗျာ... dl မရလို့ပါ
အကိုရေ ကျွန်တော် PART 3.4.5 ကို DOWNLOAD မရလို့ပါခင်ဗျာ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဒေါင်းလို့ ရအောင် ပြန်လုပ်ပေးပါခင်ဗျာ. ကျန်တာတွေက အကုန် ဒေါင်းပြီးသွားပြီ. မြန်မာနိုင်ငံကနေ စိတ်ပင်ပန်းခံပြီး ဒေါင်းရတာမို့ပါ. ၃ ဖိုင်ထဲကျန်တာဆိုတော့လိုချင်မိပါတယ်.
Lone Lone May 31, 2012 at 1:18 PM
အကိုဆိုဒ်လေးထဲကို ၀င်ပြီးလိုအပ်တာလေးတွေကို ဒေါင်းလုပ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို..ကျွန်တော် ကလေးတွေကို Eng; စာသင်ပေးချင်တယ်..မှုလတန်းကလေးတွေ ဖြစ်တဲံအတွက်.လွယ်ကူတဲ့ Eng; soft; လေးတင်ပေးပါအုံး...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..အကို..ကျန်းမာပါစေ
အစ်ကိုရေ ဒေါင်းလို့မရဘူးဗျ ကျွန်တော်လည်းလိုချင်တယ်အစ်ကို ။
အစ်ကိုအဆင်ပြေရင် အချိန်ရရင် ကျွန်တော့်မေးလ်လေးကို ပို့ပေးလို့ရမလားအစ်ကို။( monmonaung79@gmail.com )ပါအစ်ကို။
ဒေါင်းရတာ skydrive Link တစ်ခုပဲ အဆင်ပြေတယ်အစ်ကို ။
maung nyeinchan June 5, 2014 at 5:50 AM
ရခိုင် February 3, 2016 at 1:22 PM
download လို့မရတော့ဘူး ပြန်တင်ပေးပါလား